यसकारण बाजी मार्दैछ कांग्रेसले दुई नम्बर प्रदेशमा ! « Surya Khabar
यसकारण बाजी मार्दैछ कांग्रेसले दुई नम्बर प्रदेशमा !
काठमाण्डौ । सोमबार दुई नम्बर प्रदेशमा तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । उक्त प्रदेशमा हुने निर्वाचनले यसबेला मुलुकभरकै राजनीतिक परिवेश ह्वात्तै तातेको छ । अघिल्लोपटक भएका पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन अलि फरक र राजनीतिक समीकरणका हिसावले महत्वपूर्ण पनि देखिएको छ, किनभने लामो समयदेखि मधेसको मुद्धामा केन्द्रीत हुँदै आएको राजपा लगाएका मधेसी दलहरुको सबैभन्दा गढ क्षेत्रको रुपमा चिनिने यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले समेत निकै ठूलो टक्करको सामना गर्नुपर्ने देखिदैछ ।
वास्तवमा दुई नम्बर प्रदेशमा सोमबार हुने चुनावमा कुन पार्टीको मतपरिणाम अघि आउला र कसको प्रभाव बढी होला ? यो विषयमा हामीले निकै सुक्ष्म ढंगले एउटा अध्ययन गरेका छौ । जसलाई नमुना सवेक्षणकै शैलीमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा जम्मा आठ जिल्ला रहेका छन् । त्यसभित्र १ सय ३६ स्थानीय तहहरु रहेका छन् । तीमध्ये हामीले आठ जिल्लाका आठवटा जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा कुन पार्टीको उपस्थिति कस्तो रहेको छ र कसले बाजी मार्न सक्छ भन्ने विषयमा केही अध्ययन गरेका छौ । जसले ती जिल्लाको मतभारलाई संकेत गरिदिन्छ ।
पूर्वको राजविराज नगरपालिकादेखि बीरगञ्ज महानगरपालिकासम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राजपा, माओवादी केन्द्र र अन्य मधेसवादी दलहरुकै टक्कर देखिदैछ, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र राजपा निर्णायक शक्तिमा देखिने संकेत देखापरेको छ । कुन नगरमा कुन पार्टीको उपस्थिति बलियो छः यस्तो छ पछिल्लो स्थितिः
पूर्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकामा राजपा निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । यहाँ राजपालाई माओवादी केन्द्रले पछ्याएपनि उसले नेपाली कांग्रेसतिर समर्थन संकेत दिएमात्र पनि माओवादीको पत्तासाफ हुनसक्ने आंकलन गरिदैछ । त्यसैले यो नगरपालिकाको मतपरिणामबारे चुनावको अघिल्लो साँझ मात्र आंकलन गर्न सकिने बताइदैछ ।
सिरहा सदरमुकाममा रहेको सिरहा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र एमालबीच टक्कर देखिएको छ । यहाँ दुवै पार्टीले प्राज्ञिक क्षेत्रका उम्मेद्वारहरु उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले डा.सुभास यादवलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ । डा.यदाव कांग्रेसकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा हुन् । त्यसैले यहाँ उनको प्रभाव निकै रहेको बताइन्छ । यो नगरपालिकामा कांग्रेसको जित सुनिश्चित जस्तै भएको स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
हिन्दुहरुको प्रसिद्ध धार्मिक शहरको रुपमा परिचित जनकपुरसँग जोडिएको धनुषाधाम नगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच टक्कर हुने देखिएको छ । यो नगरपालिकाका लागि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधि, पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव लगायतका नेताहरुको जिल्ला भएकोले पनि यहाँ नेपाली कांग्रेसको जित हुने आंकलन गरिदैछ । किनभने यो नगरपालिकामा नेता निधि, कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादव, अर्का मन्त्री मेहन्द्र यादव पनि खटिरहेकोले जित सुनिश्चित भएको बताइदैछ ।
महोत्तरीको सदरमुकाम रहेको जलेश्वर नगरपालिकामा भने नेपाली कांग्रेस,एमाले र मेधसी दलहरुको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । मधेसी दल र एमालेले आन्तारिक रणनीति बनाएपनि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अशोक साह मेयरका उम्मेद्वार भएकोले नेपाली कांग्रेसको जित हासिल हुने बताइदैछ । यद्यपि, त्यहाँ एमालेले दलित समुदायबाट मेयरको उम्मेद्वार उठाएकोले कडा चूनौती भने कायमै रहेको बताइएको छ ।
सर्लाहीको सदरमुकाम रहेको मलंगवा नगरपालिकामा पनि त्रिपक्षीय भीडन्त देखिने भएको छ । मलंगवामा नेपाली कांग्रेसको जीतको संकेत कसरी पनि देखिन्छ भने राजपाका नेता एमाले प्रवेश गरेपछि उसको शक्ति सबै एमालेसँग चिढिएको छ । राजपाका नेता जंगीलाल यादव केही दिनअघि मात्र एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसैले राजपाको गढ मानिएको सो नगरपालिकामा अब सिंगो राजपाले कांग्रेसलाई जिताउने अभियानमा लागेको बताइन्छ । राजपाले जसरी पनि जंगीलालको साख गिराउने रणनीति अनुरुप नेपाली कांग्रेसलाई सघाउन थालेको बताइन्छ ।
यो पटक एमाले नेता माधव नेपालको प्रभावलाई घटाउने उद्धेश्यले रौतहटको गौर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र फोरम नेपालले तालमेल गरेका छन् । फोरम नेपालले नेपाली कांग्रेसलाई सघाउने वित्तिक्कै त्यहाँ एमालेको प्रभाव घट्ने र कांग्रेसको पक्षमा पल्लाभारी हुने देखिएको छ ।
कलैया नगरपालिकामा भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच केही आन्तरिक मनमुटावका कारण प्रभाव पर्ने जस्तो देखिएपनि नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेचन्द्र यादवको आफ्नो छोरा नै मेयरमा उठेकोले त्यहाँ कांग्रेसको जित हुने देखिदैछ । यद्यपि, त्यहाँ श्रममन्त्री समेत रहेका फरमुल्लाह मन्सुरले असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । तैपनि त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले नै बाजी मार्ने आंकलन गरिदैछ ।
बीरगञ्ज महानगरपालिका राजपाको गढ ठाउँ भएकोले एमालेको प्रभाव कम हुनु स्वाभाविक हो । एमालेको प्रभाव कम भएसँगै बीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव बढेको बताइन्छ । बीरगञ्जको चुनावी माहोल उत्तारचढावमा रहेकोले त्यहाँको स्थिति आंकलन अहिले गर्न सकिने स्थिति नभएको बताइएको छ । यसरी समग्र रुपमा हेर्दा दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको राम्रो प्रभाव देखिएको पुष्टि हुने जानकारहरु बताउँन् ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य खतिवडाको टिप्पणीः बाँदर जस्तो अरुको भत्काउने काम एमालेले गर्दैछ